Visa Amerikanina ho an'i Afghanistan - ALinks
Etazonia i Etazonia no firenena matanjaka indrindra eran-tany. Izy io koa dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra hipetrahana eto an-tany na dia lafo vidy aza ny mipetraka any Etazonia. Betsaka ny mpifindra monina maniry ny hankany Etazonia na hipetraka na hitsidika na inona na inona tanjona. Etazonia koa dia iray amin'ireo toerana fialan-tsasatra be mpitia indrindra amin'izao fotoana izao. Tonga any amin'ny visa amerikanina, sarotra ihany koa na sarotra ny mahazo azy. Na dia mety ho mora kokoa aminao aza ny visa mpizahatany raha maniry ny hitsidika an'i Etazonia mandritra ny fotoana fohy ianao. Andao ary hodinihintsika hoe inona ireo dingana fototra ilainao hanaraka anao hahazoana visa any Etazonia avy any Afghanistan. Azonao atao koa ny mangataka visa any Etazonia amin'ny Masoivohon'i Etazonia ao amin'ny tranonkala ofisialin'i Afghanistan.
Fitsipika US Visa
Zahao ny fanamarinana ny pasipaoronao
Raha tsy hoe tsy voahaja amin'ny fifanarahana manokana momba ny firenena ianao dia tsy maintsy manan-kery mandritra ny enim-bolana farafahakeliny ny pasipaoronao mihoatra ny fotoana hijanonanao any Etazonia. Ny olona mangataka visa dia tokony handefa fangatahana misaraka raha toa ka mihoatra ny olona iray no voatanisa ao amin'ny pasipaoronao. Azonao atao ny manamarina ny lisitra ho an'ireo firenena afaka Eto.
Nameno ny taratasy fangatahana an-tserasera DS-160 ho an'ny visa tsy mpifindra monina
Azafady azafady fa amin'ny taratasy fangatahana dia tsy maintsy mamaly ny fanontaniana tsirairay ianao. Azafady apetraho ny "Tsy misy" raha manana valiny amin'ny fanontaniana iray ianao (Aza avela ho foana izany). Averina ny endrika tsy marina ary ilaina ny fanendrena hanao tafa sy dinika vaovao.
Zava-dehibe hodinihina! Betsaka ny mpangataka visa any Etazonia no mameno ny DS-160 tsy ara-dalàna ary nahemotra ny fizotran'ny visa azon'izy ireo ka nahatonga ny daty faran'ny fandaharam-potoana hanaovana dinidinika momba ny visa.
Angony ny antontan-taratasy rehetra mifandraika amin'izany
Ho an'ny fanadihadiana visa, pasipaoro fotsiny, ny taratasy fanamafisana DS-160 ary ny sary misy loko 2 x 2 santimetatra tsy mihoatra ny 6 volana no ilaina. Raha mahafeno fepetra ianao dia maro ny taratasy azo angatahina aminao. Ohatra, ny taratasy fanampiny ilaina dia mety misy ny porofon'ny:
Ny fikasanao handao an'i Etazonia
Antony amin'ny fitsidihanao
fahaizana manefa ny vola lany rehetra amin'ny dia.
Fanamarihana: Ireo mpangataka visa dia tsy maintsy mahafeno fepetra, fa tsy fiantohana avy amin'ny fianakaviana amerikana sy namana, eo amin'ny fototry ny toerana onenan'ny mpangataka sy ny rohy mankany ivelany. Ny visa mpizahatany tsy mpifindra monina dia tsy takiana amin'ny taratasy fanasana na fanekena. Azafady mba tadidio fa tsy singa iray ampiasainay hamantarana raha tokony homena na holavina ny visa fizahan-tany tsy mpifindra monina raha te hitondra fanasana na fanambarana fanohanana ianao amin'ny resadresaka nifanaovanao.
Raiso fandaharana ny tafatafa ary alefaso ny antontan-taratasinao
Azafady mba zahao ny rafitra fanendrena NIV amin'ny Internet raha misy fanendrena anao hanao dinidinika momba ny Visa tsy mpifindra monina (NIV). Nomeraon'ny fanamafisana Visa an-tserasera DS-160 Azafady mba asio ny DS-160 anao. Ho hitanao amin'ny lahatsoratra matevina ao amin'ny pejy DS-160 voamarinao izany. Amin'ny fotoana anaovana dinika dia asehoy ny endrika DS-160 voamarinao, sary miloko 2 x 2 2 (XNUMX ″) ary pasipaoro manan-kery tamin'ny fotoana nanadihadiana.
Resadresaka farany amin'ny visa Consular Officer ary mandoa ny saranao
Ireto manaraka ireto ny fandaniana amin'ny visa tsy azo averina amin'ny laoniny dia aloa amin'ny andro ana-panadinadinana anao: 160 dolara amin'ny visa tsy-immigratory B-1 (Business) ary B-2 (fizahan-tany & fitsidihana); 190 dolara amin'ny visa H, L, O, P, Q ary R, ​​ary 270 dolara amin'ny visa E.
Hanapa-kevitra ny konsulat mandritra ny dinika ataon'ny visa raha toa ka manana ny mari-pahaizana mendrika hahazoana visa ianao, ary raha izany, inona no karazana visa mety arakaraka ny tanjonao. Tokony hofaritana fa mahatanteraka ny mason-tsivana sokajy visa ianao eo ambanin'ny lalàna amerikana izay angatahinao. Ao anatin'ny fizotran'ny fampiharana anao dia azo atao ny scan ny dian-tànana nomerika tsy misy ranomainty.
Ny andro ara-dalàna amin'ny fanangonana NIV dia manomboka amin'ny 1:00 ka hatramin'ny 3:00 isaky ny alarobia raha tsy hoe tsy mitovy ny toromarika ofisialin'ny consular.
AghanistanVisa amerikanaVisa any Etazonia ho an'i AfghanistanVisa any Etazonia ho an'ny Afghans
Torolàlana ho an'ny teti-bola ho amin'ny fitsangatsanganana any Arabia Saodita
Febroary 4, 2020
Ahoana no hahazoan'ny karana visa visa?
Ahoana ny fomba hahazoana visa any Canada?
Helmet ambany ambany noho ny 5000 any India
Ampiharo ny visa visa amerikana
Ahoana ny fomba hahazoana trano any Etazonia?
Desambra 28, 2020
Fotoana tsara indrindra hitsidihana sy hijery an'i Sodana Atsimo